Sidee barnaamijka Mail ugu shaqeeyaa iOS 9 | Wararka IPhone
Codsiga Boosta ee ku jira iOS 9 lama yimaado astaamo badan oo cusub, laakiin wuxuu hayaa dhowr faahfaahin oo muhiim ah sida awoodda inuu tirtiro dhammaan emaylka hal mar. Cusboonaysiinta kale ayaa ka faa'iido badan, maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan tafatirno sawir aan soo dirayno ama aan helnay si aan u muujino wax aan dooneyno xiriirkeennu inuu diiradda saaro. Berrito iPhone-ka soo socda ayaa la soo bandhigi doonaa walina waxay noqon doontaa toddobaad iOS 9 lagu faafinayo si guud, laakiin ma dhaawaceyso in dib loo eego sida barnaamijka Mail uu u shaqeeyo macruufka 9 ama, haddii aad ku cusub tahay macruufka, soo ogow wax kasta oo aan ku qaban karno dalabka boostada macruufka ah ee iOS.
1 Sida loo diro emayl leh Boostada
2 Sida loo lifaaqo feyl
3 Sida loo isticmaalo macruufka 9 Dialing (cusub)
4 Keydso faylka iCloud Drive (cusub)
5 Sida loogu daro sanduuqa boostada
6 Dhaqdhaqaaqa boostada
7 Tirtir fariimaha oo dhan (cusub)
Sida loo diro emayl leh Boostada
Diritaanka iimaylku wax qarsoon malaha waana mid dareen leh. Waxa ugu horeeya ee aan sameyno waa taabashada astaanta Fariin cusub (fiiri sawirka) ka dibna buuxi beeraha:
Duurka dhexdiisa "Wixii:" Waxaan galin doonaa emayllada aan rabno inaan u dirno emaylka. Waxaan dhigi karnaa emayl badan inta aan rabno. Markaan bilowno inaan wax qorno, sida macaamiisha kale ee emailka ah, waxay na siin doontaa cinwaanno u dhigma xarfaha aan soo galnay. Haddii aan doorbidno, waan taaban karnaa calaamadaha lagu daray (+) oo waxaan ka raadin karnaa xiriirada liiska.
Duurka dhexdiisa «Cc / Cco; Ka mid ah: " Waxaan arki doonnaa emaylka meesha aan u dirayno emaylka. Haddii aan halkaas ku taabno, waxaan ku dari karnaa cinwaan loo diri doono nuqul ka mid ah warqadda.
En "Afife:" waxaan dhigi doonaa sharaxaad kooban oo ku saabsan emaylka, tusaale ahaan, "sawirada cashada." Dhinaca midig waxaan arki doonaa gambaleel u adeegi doona inuu na soo ogeysiiyo markii e-mailkaas laga jawaabo. Waanu dhaqaajin doonnaa si aan u helno ogeysiis xitaa haddii aanaan haysan ikhtiyaar aan ku soo ururinno farriinta "riix" firfircoon.
Sida loo lifaaqo feyl
Si aad ugu lifaaqdo feyl waxaan kaliya ku qasbanaaneynaa riix hal ilbiriqsi booska jirka ee fariinta, kaas oo baarka aad ku aragto shaashadaha hore ka soo muuqan doono. Laga soo bilaabo baarkan waxaan:
Beddel qaabka qoraalka.
Kudar lifaaq ka iCloud Drive.
Gali sawir ama muuqaal
Sida loo isticmaalo macruufka 9 Dialing (cusub)
Sawirada aan ku lifaaqno ama emayl ku lifaaqan nahay, waan helnay Garaacida. Markup waa wax yar Tifatiraha Sawirka taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan "calaamadeyno" sawirada si aan u iftiiminno aag, aan u weyneeyo, ku darno saxiix ama aan ku darno qoraal. Way fududahay in la isticmaalo. Si aan u dhaqaajino, waa inaan kaliya farta saarnaa sawir ilbiriqsi ah waxaanan arki doonaa xulashooyinka. Haddii aan dirayno emaylka, baarka xulashooyinka madow ayaa soo muuqan doona waana inaan raadino "Dialing". Haddii aan helnay sawirka ku lifaaqan emayl, waa inaan dooranaa "Calaamadee oo jawaab".
Haddii aad tahay dadka isticmaala OS X Yosemite, adeegsiga Dialing ayaa kuu fududaan doonta. Waxaan leenahay:
Gacanta kor u qaaday: tan ayaa noo oggolaan doonta si xor ah u sawir. Gacanta kor loo qaaday ayaa leh nidaamka caqliga leh taas oo turjumi karta waxa aan rabno inaan sawirano. Haddii aan sawirno wax u eg falaar, waxay na siin doontaa fallaar aan ku dhejino sawirka. Isla sidaas ayaa ku dhacda qaababka intiisa kale sida laba jibbaaranaha, wareegyada ama xitaa goobooyinka majaajillada ah.
Muraayadda qurxinta: ayaa noo oggolaan doonta ballaadhi qayb ka mid ah sawirrada. Waxaan ku soo dhaweyn karnaa ama ka soo bixi karnaa innagoo ku dhex siibanayno ama u dhignay gudaha muraayadda weyneysa.
Qoraalka: sidaad u maleyn karto, waxay u adeegtaa ku dar qoraal.
Murerfirma: Wixii saxeexkeena ku dar. Haddii aan horey u sameysanay Yosemite, waxaan ka heli doonnaa taleefankayaga iPhone-ka, illaa iyo inta aan ku xirnahay koontada 'iCloud'. Haddii kale, waxaan ku dari karnaa saxiix waqtigaas waana heli doonnaa mustaqbalka.
Keydso faylka iCloud Drive (cusub)
Sida aad ku arki karto sawirkii hore, ee xiga "Markup" (oo calaamadeyn doona marka nooca rasmiga ah la sii daayo), waxaan sidoo kale helnay ikhtiyaar aan ku keydin karno lifaaqa ku jira iCloud Drive. Haddii aan dooranno xulashadan, iCloud Drive ayaa la furi doonaa waxaanna kuu sheegi doonnaa galka uu ku kaydin doono faylka ku lifaaqan.
Sida loogu daro sanduuqa boostada
Ku darista sanduuqa boostada waa wax dareen leh. Tan awgeed waa inaan kaliya:
Kadibna waanu taabanaynaa Sanduuqa boostada cusub.
Waxaan ku muujineynaa galka aan rabno inaan dhigno sanduuqayaga cusub
Waxaan ku tusineynaa haddii aan ka rabno iCloud ama meel kale. Maaddaama aanan mid kale haysan, waxaan ku dhejiyay iCloud.
Dhaqdhaqaaqyada farriintu kuma cusba iOS 9. Maxaa haa waa cusub yihiin astaamaha in aan arki doono marka aan sameyneyno. Laga soo bilaabo qoraalka aan ku aragno macruufka 8 waxaan aadeynaa icons, sida aad ku arki karto sawirkii hore. Waxaan haynaa saddex tilmaamood oo la heli karo:
Waxaan u socon doonaa dhanka midig si aan ugu calaamadeyno sida akhrinta / akhrinta. Haddii aan sameyno tilmaam gaaban, waan taaban karnaa astaanta, laakiin waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo tilmaanta dheer maadaama ay si otomaatig ah u sameyneyso saameyn boodbood leh.
Waxaan u dhaqaaqi doonnaa dhanka bidix anaga oo tilmaam dheer aan ku tirtireyno boostada.
Waxaan dhanka bidix uga dhaqaaqeynaa tilmaam gaaban si aan u aragno fursado badan. Ikhtiyaarradan waxaa laga qaabeyn karaa Settings / Email, Xiriirada, Jadwalka Kalandarka / Mail / Swipe.
Tirtir fariimaha oo dhan (cusub)
Tani waa ikhtiyaar cusub oo ku jirta macruufka 9 ee kuwa aanan sharrax ka bixinaynin sida ay muddada dheer ku qaateen in lagu daro. Si aad u tirtirto fariimaha oo dhan, waa inaanu qasabnaa inaan wax ka bedelno oo "Delete all" Waxaan sidoo kale u rari karnaa dhammaan farriimaha galka kale ama dhammaantood waxaan ku calaamadeyn karnaa tilmaame.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sidee ayuu barnaamijka Mail ugu shaqeeyaa iOS 9
Wanaagsan !!! Ugu danbeyn!!! Halleeluuya !! Waxaan sugayay ikhtiyaarkan muddo sanado ah, ma awoodo inaan tirtiro emayllada hal mar .. Wax aad u fudud oo aan la qaban karin, waxay iila muuqatay wax laga xishoodo. waxay ka saarayaan daqiiqada ugu dambeysa :)
Waxay noqon kartaa in jirka emaylka aan la baari karin, kaliya raadso maadada ama la xiriir!
Fiidiyowga la sheegayo (been abuurka ah) wuxuu xaqiijiyaa iPhone 6s casaan ah iyo qeexitaanno kale